गृहमन्त्री थापाद्वारा ढोरपाटनका बाढी प्रभावितलाई राहत, जनताको दुःखमा सरकारले साथ दिने आश्वासन | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more गृहमन्त्री थापाद्वारा ढोरपाटनका बाढी प्रभावितलाई राहत, जनताको दुःखमा सरकारले साथ दिने आश्वासन
गृहमन्त्री थापाद्वारा ढोरपाटनका बाढी प्रभावितलाई राहत, जनताको दुःखमा सरकारले साथ दिने आश्वासन
भदौ १९ गते, २०७७ - १५:१५
काठमाडाै‌ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ढोरपाटनका बाढी प्रभावितहरुलाई आज राहत सामग्री प्रदान गरेका छन् । उनले ढोरपाटन नगरपालिका–९ सुप्राङको बाढीग्रस्त क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनसमेत गरे ।
राहत वितरणपछि बोल्दै गृहमन्त्री थापाले बाढी प्रभावितहरुको राहत र पुनःस्थापनामा सरकारले सघाउने बताएको सासंद् पौडेलले जानकारी दिए । “जनताको दुःखमा सरकार साथै रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ”, उनले भने ऽ
गृहमन्त्री थापाले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई सरकारले रु. दुई लाखका दरले राहत प्रदान गर्ने बताएका छन् । यस्तै पूर्णरुपमा क्षति भएका घरको पुनः निर्माणका लागि रु. तीन लाख सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको सांसद् पौडेलले बताए । उनले बाढीले क्षतिग्रस्त बनाएको सालझण्डी–ढोरपाटन सडकको मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने बताए। उनले बाढीले सडक, पुललगायत भौतिक संरचनामासमेत ठूलो क्षति पुगेकाले तिनको पुनःनिर्माणमा सबैको हातेमालो चाहिने उल्लेख गरे ।
भदौ १९ गते, २०७७ - १५:१५ मा प्रकाशित